आरक्षणको बिरोध गर्नेहरु कान खुलेर सुन। संचारकर्मी महिला अधिकारकर्मी सरु सुनार – Complete Nepali News Portal
आरक्षणको बिरोध गर्नेहरु कान खुलेर सुन। संचारकर्मी महिला अधिकारकर्मी सरु सुनार
ScotNepal July 23, 2019
चर्चित संचारकर्मी महिला अधिकारकर्मी सरु सुनार धेरै जसो दलित समुदायमा देखा परेको पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिका माथी हुने बलात्कार बिषय बस्तु हरुको कडा आवाजमा आफ्नो फेस बुक मार्फत आवाज उठाउदै आएकी छन। आजको बिषय छ ‘आरक्षणको बिरोध गर्नेहरु कान खुलेर सुन ।’ उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकी छन्।
हामीलाई प्रतिस्पर्धाको लागि डराउछ्न भन्नेहरु हिम्मत छ भने तिमिहरुले एकपटक हामी पुर्खौ देखि हामीले बिताएको जिन्दगी जियर हेर ..। हामिले भोगेको जस्तो अपमान र तिरस्कार सहेर हेर अनि हरेक क्षेत्रमा हामी जस्तै अधिकार र पहुचबाट बन्चित भएर बाच । सत्ता , शासन , नीति , नियम , सुख , भोक , अधिकार सबै तिमिहरुका लागि ?
अरे वा! आरक्षणबाट डराएका तिमिहरु पौ हौ हामीहरु होईन , जसलाई पुर्खौ देखि दलित , सानोजात , अछुत बनाएर राखी दिए । जसको आत्मसंमान, अधिकार सबैबाट बन्चित गराए । उनिहरुसंग आरक्षणको बिरोध गर्छौ ?
मेरो बुवा जस्तो आरनमा ३ बजे रातीबाट घन ठटाएर उज्यालो भए सि खेत जोत्न तिम्रा वाउ आउन सक्छन् , चिल्ला कार र चिसो ac को हावा छोडी मेसिनमा १८ घन्टा काम गर्न आउन सक्छन् ? मेरो आमा जस्तो गिटि , बालुवा कुटि , सडकमा ठेलामा तरकारी बेच्न र कुचो लिएर सडक सफा गर्न तिम्रा आमा महलमा काम गर्ने सुसारे छोडी आउन सक्छिन ?
अनि बाउलाइ आरनमा, मेशिनमा कपडा सिलाउदा , जुत्ता बनाउदा घन ठटाउदा , जुता बनाउदा मेरो बाउलाइ सहयोग गरि सरकारी स्कुलमा फाटेको जुत्ता र पुरानो कपडामा तिम्रो छोरालाई पठाउन सक्छौ ? के हिम्मत छ महङ्गो बोर्डिङ स्कुल र कलेजबाट छुटाएर मेरो छोराको दैनिकी र जिन्दगी जस्तै बिताउने ?
हिम्मत छ भने आउ हामीले बिताएको जिन्दगी , मेरो छोराछोरीले जसरी पढेका छन् त्यही स्कुल र त्यही बाताबरणमा तिम्रा छोराछोरी पढाउ आउ एकपटक हाम्रो जिन्दगी जियर हेर हामीलाई आरक्षण चाहिदैन आउ प्रतिस्पर्धा गर्न अनि हेरौ हाम्रा छोरा र तिम्रा छोराको रिजल्ट कति आउँछ छ हिम्मत ??
अह छैन त्यही भएर त तिमिहरु डराउछौ प्रतिस्पर्धामा हामी होईन । त्यसैले आरक्षण बिरोध गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । जबसम्म महल र झुपडी , शिक्षा नीति पैसा र पहुचको भरमा बिभाजन हुन्छ । जबसम्म धनी र पहुच हुनेका छोराछोरी मात्र इन्जिनियर , डाक्टर , पाइलट हुन्छन् ।
पैसा नहुनेहरु जती क्षमता भए पनि हलो जोत्न र खाडि मुलुक आफ्ना सर्टिफिकेट दराजमा थन्काएर जान पर्ने बाध्यता बनाइन्छ तबसम्म आरक्षण हामीलाई चाहिन्छ ।
अन्त्यमा लोकसेवा किन र कसका लागि ? जनताले भोट दिएर बिश्वास गरेका सांसद , नेता , मन्त्री कसका लागि ? दलित , जनजाती , मधेसी , मुस्लिम जुन पछाडी पारिएका छन् उनिहरुको अधिकारको लागि बिकाशको लागि होईन सत्तामा पुगेको र जनतालाई आसा देखाएको ?? आज यिनै भोट दिएर जिताउने जनताले खुलेलाम राजीनामा र पुत्ला जलाउदै छन् …..!!
समाबेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र आरक्षणलाई हिजो पाटिको मुलमन्त्र बनाइयो आज यहि कार्यन्वयनको लागि जनताले आन्दोलन गर्नु पर्ने ??
कहिले सम्म ???
बरु म तिमिलाई १० हजार दिन्छु भोट मलाई दिनु।
न्यूज २४ टेलिभिजनबाट नयाँ ‘रियालिटी शो’ कार्यक्रम ‘द लिडर’ प्रशारण...